Oniversite Bursa Uludağ mba handray mpiasa staff akademika | RayHaber | raillynews
HomeANKAPOBENYJobsHianatra mpiasa akademika ny Oniversite Bursa Uludağ
04 / 12 / 2019 Jobs, ANKAPOBENY
ny vatsim-pianarana dia hanao mpiasa akademika
Hianatra mpiasa akademika ny Oniversite Bursa Uludağ; Ny mpiasa akademika 2547 dia raisina ho an'ireo antokon-draharaha mifandraika amin'ny Rektorate ao amin'ny Oniversite Uludag mifanaraka amin'ny fepetra napetraky ny Lalànan'ny fampianarana ambaratonga ambony 40 ary ny lalàna navoaka mifototra amin'ity lalàna ity sy ny fepetra napetraky ny antenimieran-dàlana.
1- Ilaina ny mampihatra amin'ny sampam-pandraisana mpiasa ho an'ny mpampianatra sy ny mpampianatra mpikabary amin'ny fanambarana ary amin'ny sampana mifandraika amin'ny mpikamban'ny mpitsabo ao anatin'ny 15 (dimy ambin'ny folo) andro taorian'ny daty nanambarana.
2- Ny mpampianatra mpiara-miasa dia raisina ho miasa mandritra ny toerana maharitra araka ny paragrafy 2547 ny Andininy (a) ny andininy 36 ao amin'ny lalàna laharana 1.
3- Ireo mpilatsaka hofidina dia takiana hanatanteraka ny fepetra takian'ny lalàna 657 Article 48.
4- Ny fampiharana dia hatao samirery. Ireo fiasa navoakan'ny paositra tsy hodinihina.
5- Ireo mpifaninana izay voatendry ho an'ny mpiasa notsorina dia adidy hitoetra eo amin'ny toerana misy ny mpizara miasa.
6- Ireo antontan-taratasy ilaina dia voalaza ao amin'ny petra-kevitra fangatahana sy ireo mpangataka izay tsy afaka miditra amin'ny alàlan'ny rafitra UAKBİS dia ampiharina amin'ireo antontan-taratasiny. (Fangatahana santionany fanampiny http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/Ny mpiasa dia nivoaka tao amin'ny adiresy)
7- Bursa Uludağ University Rectorship dia afaka manafoana ilay dokambarotra navoaka isaky ny sehatra. ”
Famotsorana daty sy toerana: 03.12.2019 - www.resmigazete.gov.t dia
Fe-potoana fampiharana: 17.12.2019 talata
Bursa Technical University ao amin'ny Oniversite
Kırklareli University dia handray mpiasa staff akademika
Bursa Uludağ University Akademia Fandraisana mpiasa